Mulkiileyaasha Magaalada Panama ee Magaalada Panama ayaa soo afjaraya Wixii Duufaantu Michael Bilowday - Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid
Mulkiileyaasha Magaalada Panama ee Magaalada Panama ayaa Dhameystiraya Maxay Duufaantu Michael Bilowday
Home/updates/Mulkiileyaasha Magaalada Panama ee Magaalada Panama ayaa Dhameystiraya Maxay Duufaantu Michael Bilowday
Boqolaal ka mid ah dadka degan guryaha danyarta ah ee ku nool Panama City ayaa helay ogeysiisyo guryo raacid ah maalmahan kadib dabayaaqadii masiibada 4 ee Duufaanta Michael, taas oo gobolka ku kaliftay inuu noqdo gobol aan la aqoonsan. Marka la soo koobo, waxay umuuqataa aag dagaal.
Meel aan baadiyaha lahayn, geed lahayn, dhisme looga tirinayn cabirkiisa dabaylaha dabaysha ee Michael, ayaa u degganaan deganeyaasha saboolka ah ee darbigooda ma ahayn jabay. Waarayaashii duufaanta oo sidday isla duufaantii dhammaantood duufaannadii sida tii dambe taariikhi ah waxa kaliya ee la soo galay ogeysiin milkiileyaal ah oo milkiileyaasha la soo ogeysiiyay ay albaabadooda ku dhegan yihiin. Ogeysiisyadu waxay siiyeen hal ilaa seddex maalmood inay baxaan.
Lama siin wax magdhaw ah oo kiro ah, mana laha amar bixin ku-meel-gaar ah iyada oo loo maleynayo in wax kasta oo ka hadha ay burburi doonaan xushmadda milkiilayaasha dhulka.
Guryaha Makedoniyaanka ah ee Makedonia, subaxii ka dib mulkiilayaashu waxay bixiyeen hadal afka ah oo ah in dadka degani ay nasan karaan si fudud ilaa Noofembar 1st marka go'aano dheeri ah oo ku saabsan ka saarida la siin doono, deganayaashu waxay ku tooseen inay ka helaan ogeysiis guri ka saarid ah oo ah 72-saac albaabadooda. Markii milkiileyaasha goobta lagu arkay, waxay lahaayeen ciidan yar oo boolis ah oo weheliya, sharaf u leh sanadihii wadajirka ahaa ee kirooyinka kirada iyo kireysashada taas oo xirtay jeebkooda waqtiyada wanaagsan waxayna ku dhawaaqi doonaan duufaan ku soo darista xun. waqtiyada naxdinta iyo baqdinta naxdinta leh ay u soo tallaaleyso si ay u banneeyaan meelaha ka sarreeya lafaha tenements-ka dilaacay. Dadka deegaanka oo amar lagu siiyay inay socod ku maraan mid ka mid ah maalmaha ugu xun noloshooda.
Degane deggan Makhaayadaha Beerta Makedoniya ayaa haya ogeysiiska gurigooda ee 72 saac
Gawaarida badan ee beelahan waxay u halgamaayaan dadka laga saaray guryahooda oo ay aad ugu yar tahay helitaanka shidaalka, xulashooyinka guryaha ee kale, cuntada dawo ama biyo socda iyo waqti lagu jiro xaalad ba'an halkaas oo masiibada ba'an ee caasiyeed ay ku kicisay cadho si ay u eegaan iyaga. isha oo garaac wixii koronto ee guriga ku haray.
Maaddaama gargaarka degdegga ah ee gargaarka degdegga ah ee gurmadka degdegga ah iyo shaqaalaha qaybinta gawaarida xamuulka iyo gawaarida sahayda leh ay si isdaba joog ah u soo mareen goobahan, macluumaadka gargaarka sharciga ee bilaashka ah ayaa la faafiyey qareennada bini-aadamka ah ee borotokoolka taagan. Kuwii ku haray guryahooda kala beddelashada leh ee hawada ka samaysan, ayaa wali sugaya FEMA ka dib markii ay horay u baajiyeen laba ballamo si ay u helaan qiimeyn ku saabsan kaalmada federaalka ee dadka deggan.
Ka-noqoshada FEMA iyo wax bandhigyo ah kama soo bixin kadib markii jihooyinka ay u dhiibeen dadka deggan ee iyagu sugayay "qof kasta oo ku nool guriga waa inuu joogaa guriga marka aan u nimid qiimeynta." sida hooyadeed cunug hal sano jir ah oo guryahooda jooga maalmo dhamaadka ah kaas oo badhku ka muuqdo hawo furan iyo “ciddiyaha iyo saqafka ayaa innaga soo dhacaya marka aan gudaha ku jirno.” Qoysaska qaarkood kama tagi karaan sababta oo ah FEMA ayaa soo socota. “Mana joogi karno halkaan markay yimaadeen."
Si loo sii wanaajiyo jawiga walaaca iyo rajo beelka, halka ay jiraan maqnaansho of FEMA si weyn ayaa loo dareemay, sidoo kale waa mid urursan joogitaanka booliska iyo millatariga oo dib-u-dhigaya burburka. Falalkaas gumeysteyaasha musiibada waxay ku xardhan yihiin waddooyinka, iyagoo gooyay taraafikada gawaadhi badan oo gawaarida gaashaaman ah oo ay ku dhejinayaan militariga bannaanka guryaha ay burbureen halkaas oo alaabada la soo saaray ay sababayaan inay argagax ku abuuraan dhaqangelinta hanti-goosadnimada jariimada. Booliska ayaa qabqabanaya dadka iyagoo ku xadgudbaya bandowga qorrax-soo-baxa ilaa qorrax-dhaca qorraxda iyagoo dadaal quus ah ugu jira sidii looga takhalusi lahaa dhacdooyinka bililiqeystayaasha sharci darrada ah ee mugdi galinta sharciga iyo amarrada khiyaanooyinka.
In kasta oo dadaallada loogu jiro in lagu ilaaliyo duufaanta lagu rito dukaammada khamriga ayaa si buuxda u shaqeynaya, musiibada masiibada ayaa horay u sii socota, iyagoo u ballan-qaadaya faa'iidooyin faa'iido u leh kuwa hada soo kacaya. Mustaqbalkee ayaynu leenahay markii ciidan caadi ah la isugu soo urursado si looga takhaluso dadwaynaha badeecada wixii dhacay musiibo ah ka dib marki shinnida dumarku ku dhex bur burto milatariga iyo militariga militariga kuwaas oo xoojinaya heerka sharciyeynta qodobada si loo hubiyo in tareenka bulshada si dhaqso leh loogu soo jiito wadooyinka. burburka deegaanka?
Afduubeyaasha maanta casriga ah iyo tahriibinta dadka ee ICE Socdaalka iyo Dhaqangelinta Kastamyada, oo ay weheliso Kastamka CBP iyo Xuduudaha 'Badbaadinta' ee dhulka ka baaba'ay ka dib kaqeybgalkoodii afduubka iyo xiritaanka boqollaal caruur muhaajiriin ah iyo qoysaskii ay ka soo kaceen. , waxaa lagu dhawaaqay hirgalinta xuduuda xuduuda inta lagu gudajiray iyo wixii ka dambeeyay duufaanta Michael, wali waxaa soo baxaaya warar sheegaya in ay daadadku soo mareen warbaahinta bulshada ee CBP oo ag taagan iyadoo ilaaliyayaasha booliisku ay badeecado ku wareejinayaan ID si ay u hubiyaan xubnaha bulshada ee khadadka cuntada.
Daraasiin daraasiin darandoorri ah oo CBP oo ay wehelinayaan ilaaliyeyaal booliis ah ayaa ku safrayay taraafikada maalintii oo dhan kadib duufaanta. Si kasta oo ay ahaato ujeedka laga leeyahay ee jiritaankooda aadka u muuqata ee muuqda ee duulaanka ku ah gobolka duufaanta dhacday, xiisadda iyo cabsida laga qabo in gaadiidkooda istaago waxay si toos ah uga soo horjeedaa caawinaad kasta oo suurtagal ah oo ay ku caddeyn karaan inay gacan ka geysanayaan bulshooyinka dhibaataysan duufaanta.
Qoraalku waa isku mid. Oo waxay ahayd muddo tobanaan sano ah. “Istaraatiijiyaddan waxay ahayd shuraako aamusnaan ku saabsanaan gelinta neoliberalism in kabadan 40 sano. Xeeladaha naxdinta leh waxay raacaan qaab cad: sug xiisad, sheeg daqiiqad waxa mararka qaar loogu yeero "siyaasad aan caadi ahayn", xayiraad qaar ama dhammaan shuruucda dimoqraadiga ah - ka dibna sida ugu dhakhsaha badan ugudambay liiska liiska shirkadaha. Halkan, Naomi Klein waxay soo bandhigtay buugga naxdinta iyo naxdinta leh ee ku saabsan maal-gelinta masiibada, kaas oo Florida panhandle lagu sawiray qaab-dhismeedka hadda waqtigan- sida dadka deg-deg ahi u socdaan, ciidan ahaan isu urursanayaan, iyadoo qabsashada booliisku ay kor u qaadayso wax kasta oo kaalmayn federaal ah oo macno leh.
Waxaan abaabulaynaa inaan kula xisaabtano milkiileyaasha guryaha, ka saarno daawadayaasha bileyska iyo millatariga musiibada ku habsatay bulshada dhexdeeda, waxay u jiraan caabbinta mudnaanta faa'iidada iyo fursad ku helida dadka iyo bulshada iyo guusha weyn ee midnimada sadaqadda.
Xorriyaddu waa buundo.
Waxay qeexeen musiibo waxaana nalooga tagay inaan qeexno soo kabashada.
2018-10-23T19:22:41-04:00Oktoobar 21st, 2018|updates|